Ny tena firafitra ao amin'ny sary Edgar Artis | Famoronana an-tserasera
Izahay foana dia mitady filokana vaovao tany am-boalohany izay, na dia mety tsy manana izany kalitao teknika goavana izany aza izy ireo afaka mamerina ny fomba fijery sy sary an-tsaina ny fomba anoloran'izy ireo takelaka na fanoharana ho anay.
Betsaka ny mpanakanto izay mitady zavatra mahazatra sy mahazatra izy ireo ny fomba fiarahantsika miangona amin'ny lamba canvas na amin'ny sary sokitra mba hanehoana fahasosorana amin'ny fiaraha-monina na hanambara ny fomba fahitan'izy ireo zavatra fotsiny. Izy rehetra dia fomba fijery avokoa, toa an'ity mpanakanto Armeniana ity izay, rehefa manapaka ny akanjon'ny vehivavy tarihiny, dia mampiasa ilay zavatra na ambadika ao aoriany hanomezana azy ilay firafitra ilaina.
Edgar Artis no mpanao sary izay mampiasa ireo tany am-boalohany sary nohetezan'ny sary izay ampiasainy hampiasa ny karazan-javatra rehetra hamoronana ireo akanjo ireo izay, amin'ny farany, dia manana fanamboarana lehibe.
Ireo sary ireo dia misy zavatra isan-karazany toy ny felam-boninkazo, zavamaniry isan-karazany ary karazan-tsakafo rehetra, ao anatin'izany ny trano. Tsy ity no voalohany nampiasa an'ity endrika am-boalohany ity mitady textures manokana handrafetana ny volon'ny akanjo, fa izay lalaoviny amin'i Artis sy ireo vehivavy izay efa nanam-piainana mialoha azy.
Amin'ny zavaboary hafa dia ampiasao ny voasarimakirana manokana hamerina endrika ny akanjo, na inona ny raozy malazo hanafina ny fitanjahana ny iray amin'ireo maodeliny. Fomba hafa hiterahana ireo zavatra mahazatra sy ireo firafitra ahafahantsika mahita lanitra manga miaraka amin'ny rahony na mozika taila ao amin'ny trano fidiovana.
Anananao ny azy Instagram, Facebook y tranonkala hanaraka ny ampahany amin'ny asany sy ireo sary azony manao amin'ny zoro marina ka misongadina kokoa ny firafitra sy ilay vehivavy voafidy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Sary an-tsary fanapahana izay tena zavatra ny firakofana